Akwụkwọ AdTech: Ihe Ntanetị Na-enweghị Ntanetị iji Mụta Ihe Niile Banyere Teknụzụ Mgbasa Ozi | Martech Zone
Coslọ ọrụ mgbasa ozi n'ịntanetị nwere ụlọ ọrụ, sistemụ teknụzụ, na usoro ọrụ ntanetị dị mgbagwoju anya niile na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nye ndị ọrụ ntanetị mgbasa ozi na ịntanetị. Mgbasa ozi n'ịntanetị ewetawo ọtụtụ ihe ọma. Maka otu, enyere ya ndị na-emepụta ọdịnaya nwere isi mmalite ego ha nwere ike kesaa ọdịnaya ha n'efu na ndị ọrụ ntanetị. A na-enyekwa ya ohere ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na teknụzụ dị ugbu a na-eto eto.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ịntanetị enwetawo ọtụtụ mgbago, enwekwara ọtụtụ ọdịda. Somefọdụ ihe atụ ndị dị mkpa gụnyere itinye ntụpọ site na dot-com afụ na ngwụcha 1990s / mmalite 2000s, na nso nso a, iwebata iwu nzuzo (dịka GDPR) na ntọala nzuzo na ihe nchọgharị (dịka Safari's Intelligent Track Prevention) nke nwere na-adịghị mma ndị mgbasa ozi metụtara, ụlọ ọrụ AdTech, na ndị mbipụta akwụkwọ.
Uzo na usoro nke mejuputara AdTech bu ihe di nkpa ma enwere ihe omuma di ole na ole ndi na akowa uzo di mfe ighota na uzo uzo mgbasa ozi intaneti si aru oru site na uzo di nkpa na uzo.
Isiakwụkwọ ole na ole mbụ nke akwụkwọ ahụ gosipụtara akụkọ ihe mere eme nke mgbasa ozi n'ịntanetị wee setịpụ ọnọdụ maka isi ndị na-esote. Clearcode na-ekpuchi isi nke mgbasa ozi dijitalụ wee jiri nwayọ malite iwebata nyiwe, ndị nnọchi anya ya, na usoro ọrụaka. Isiakwụkwọ gụnyere:
Ihe Mgbasa Ozi
Akụkọ banyere teknụzụ Mgbasa Ozi Dijitalụ
Ngwaọrụ Teknụzụ Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ na Ndị Mmekọ na Digital Advertising Ecosystem
Isi Mgbasa Ozi na Channels
Mgbado Mgbasa Ozi na Mmefu ego
Ndepụta na Reportkọ Akụkọ Mmetụta, Clicks, na Ntugharị na nyiwe AdTech
Buzọ Mediazụ Mgbasa Ozi: Mmemme, Bidding Oge-Oge (RTB), idkwụ ụgwọ isi, na PMP
Nhazi usoro data (DMPs) na ojiji data
Adị aghụghọ na ngosipụta
Nzuzo Onye Ọrụ na Mgbasa Ozi Dijitalụ
AdTech sitere na Mgbasa Ozi na genlọ Ọrụ '
Otu na Kpochapụ koodu - ụlọ ọrụ na-echepụta, na-emepe, na-ebupụta ma na-echekwa sọftụwia AdTech na MarTech - dere Akwụkwọ AdTech dị ka akụ dị mfe maka onye ọ bụla ịghọta teknụzụ mgbasa ozi dijitalụ.
Akwụkwọ dị n'ịntanetị bụ ihe enyemaka n'efu nke ndị otu na-emelite. Can nwere ike ịnweta ya ebe a:
Guo akwukwo AdTech
Tags: mmefu egoad mgbanwead wayomgbasa ozimgbasa ozioghere admgbasa ozi ezubere ichead techmgbasa ozimgbasa oziOkwu AdTechmgbasa ozimgbasa ozi ọwandị mgbasa oziteknụzụ mgbasa oziAttributiongburugburu ebe obibi nke mgbasa ozi dijitalụteknụzụ mgbasa ozi dijitalụn'efu akụrụngwamgbasa ozi n'ịntanetịihe ntanetibuyingzụ mgbasa ozi mmemmenjirimara njirimaraonye ọrụ nzuzo
Etu esi mepụta asọmpi #Hashtag na Social Media